Ọdịnaya Gị na-esi isi n'ihi na ọ na-efu ihe ndị a | Martech Zone
Wednesday, September 9, 2015 Wednesday, September 9, 2015 Douglas Karr
Nkwupụta ụlọ ọrụ na-akọ na akụkọ na-aga n'ihu na-ekwupụta eziokwu ahụ bụ na ịdị oke mkpa na ịhazi onwe onye bụ igodo zuru oke iji na-abawanye ọnụego ntụgharị. Gini mere na mgbe ahu ndi n’ere ahia n’ime ya na-ano n’ide akwukwo ndi mmadu n’iile dicha dika ndi ozo? N'abalị ụnyaahụ, emere m ihe ngosi na mpaghara Edemede omume na m kpọrọ ya:
Ọdịnaya Gị na-eme nzuzu. Kpọmkwem Dị Ka ed Chọrọ Ya Ka.
Isi okwu m na ngosi a abụghị ịkparị ikike mmadụ nwere ide ọdịnaya; ọ bụ ịkatọ ikike ha nwere dee ederede maka ndi na ege ha. Anyị na-adakarị ịda azụ na ide ọdịnaya ahụ anyị kwenyere dị mkpa, mana nke ahụ na-ejikọta naanị akụkụ dị nta nke ndị na-ege anyị ntị.
Nsogbu anyị bụ na ndị na-ege anyị ntị dị iche iche. Atụmatụ abụọ nwere ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ ga-enwe ga-enwe ọtụtụ usoro dị iche iche maka ịkwalite mmekọrịta gị na ụlọ ọrụ gị. Anyị anaghị echebara nke ahụ echiche.
Ihe 5 iji bulie afọ ojuju gị
Mee ka ịmara - site na itinye foto, ọdịyo, ma ọ bụ vidiyo ị ga-eme ka mmetụta na cognition nke isiokwu ị na-ede dịkwuo elu.
Mee Shareable - ichota ọdịnaya iji wulite uru nke ndị na - agụ ya ma ọ bụrụ na ha ekekọrịta ya bụ atụmatụ dị ịtụnanya. Nyere ndị na-agụ aka kawanye netwọkụ ha, nyere ndị na-agụ aka kwalite njirimara ha, nyere ndị na-agụ aka itinye aka na ịkesa ọdịnaya na obodo ha, ma ọ bụ gwa ha ihe kpatara ha ga-ekerịta n'ihi na ha na-elekọta.
Mkpebi Nkwado - ụfọdụ ndị na - agụ akwụkwọ na-enwe ntụkwasị obi, eziokwu, arụmọrụ, mmetụta uche nke ijikọ ya. Idozi ọdịnaya nke nwere ihe ndị a niile ga-ejikọ ọtụtụ ndị na - agụ ya.
Kwadoro Action - gụnye ọdịnaya na-akpali kwenye - njikọ, nnata, nkwenye, ụkọ, nkwụsi ike, na ikike.
Hazie - ndị mmadụ anaghị agbanye ndụ ha mgbe ha rutere ma ọ bụ hapụ ọrụ. Purchazụta azụmahịa na-emetụta ndị enyi, ezinụlọ, na mmepe onwe onye anyị. Purchazụta onwe gị na-emetụta ọrụ gị. Purchasezụ ụgbọ ala, dịka ọmụmaatụ, nchegbu ndị nwere gas ga-eme ogologo njem.
N'okwu a, anyị mere nyocha na ụlọ ọrụ e-commerce ụnyaahụ. Ha nwere njigide nnabata dị egwu na ọnụego mgbanwe dị elu, mana ka oge na-aga, ha nwere oge siri ike inweta ndị ahịa ọhụụ. Mgbe anyị na ha kparịtara ụka, ihe mbụ ha gwara anyị bụ etu ụlọ ọrụ ha siri pụọ iche. Ha sitere na 100% nke America. Imirikiti ihe ha na-eme bụ ngwaahịa ndị Amerịka mere (ụfọdụ ihe anaghị enweta ebe a). Ha zara ekwentị ha maka oku ọ bụla. Ha wuru ulo nkwakọba ihe ha 100% ejiri ike anyanwụ rụọ!
Aghọtara m na nke a bụ ọnọdụ dị oke egwu, mana ihe niile ha ji eme ọnụ maka ụlọ ọrụ ha siri ike ma ọ bụ ihe agaghị ekwe omume ịchọta na weebụsaịtị ha! Gịnị ma ọ bụrụ na anyị gbanwee ọdịnaya ha na ihe ndị a:
Tinye ihe image nke ụlọ ọrụ ahụ na-emetụta onye ọbịa ozugbo ha ruru na saịtị ahụ.
Kekọrịta ndị ozi ọma n'inweta nnwere onwe ike. Ibu oru ndi mmadu na gburugburu ebe obibi bu ihe kpatara otutu ndi na - aguta ihe.
Gụnye eziokwu nke ụlọ ọrụ, infographics, whitepapers, testimonial, na case studies iji nyere aka kwado ndị ọbịa ' mkpebi.
The ahịa ugbua nwere ụfọdụ mbụ free mbupu na ego na-enye. Ikekwe ịtinye ụbọchị ụbọchị ọ ga-agwụnahụ ya nwere ike ime ka onye ahụ kwenye site n'ikwu ya ụkọ.
Ndị folks a nwere mmụọ siri ike! Gini na agunyeghi vidio ndi akuko banyere akuko nke ulo oru, oru ndi ahia di egwu, na ufodu profaịlụ ndi oru. Ijikọ ya onwe na ndị na-ege ntị ga-ebugharị ntụgharị.
Ọzọkwa, ihe ị kwenyere na ọ dị oke mkpa maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị abụghị ihe onye ahịa gị kwenyere dị oke mkpa. Agencylọ ọrụ anyị na-elekwasị anya na mgbanwe. Mana oge ụfọdụ ndị ahịa na-enwekarị mmasi maka ogo ọdịnaya anyị na-enye. Nke ahụ bụ ihe anyị kwesịrị icheta ka anyị na-ede ọdịnaya na-akwalite ụlọ ọrụ anyị!
Tags: cognitionịme mkpebikeonwekwenyeNkesa